Maitiro Ekusarudza Akanyanya Midzi Martech Zone
Maitiro Ekusarudza Akanakisa Makwara eYako Vatengi Tsigiro Strani
China, August 29, 2019 NeChishanu, Nyamavhuvhu 30, 2019 Ashwini Dave
Nekuuya kweye ratidziro dzebhizinesi, kuongororwa kwepamhepo, uye midhiya enhau, yako kambani kambani rutsigiro rwevatengi zvino rwasangana nemukurumbira wechiratidzo chako uye ruzivo rwevatengi online. Kutaura chokwadi, hazvina basa kuti kushambadzira kwako kwakakura sei kana rutsigiro uye ruzivo zvichishayikwa
Chiratidzo chekambani chakafanana nemukurumbira wemunhu. Iwe unowana mukurumbira nekuyedza kuita zvakaoma zvinhu zvakanaka.
Ndivako vatengi vako uye chiratidzo chako pane zvinokamurana nguva dzose?
Kunyangwe yako kambani ichinyura mazino mudhipatimendi reVatengi.
Kunyangwe ichigutsa uye kazhinji ichidarika zvinotarisirwa nevatengi vako.
Kunyangwe ese emahara (uye anodhura zvakanyanya) mapaipi uye mapurogiramu ekuvimbika iwe unobuda nguva nenguva.
Kana mhinduro kune zvese izvi ndi "hongu," iwe unofanirwa kudzokera kubhodhi rekudhirowa uye kushanyirazve yako chirongwa chebasa revatengi. Kuti tikutungamirire pamwe, ngatinzwisise "nei" pamberi pe "sei" uye titarise izvo zviri kukonzera kuti vatengi vako vafambe kuenda kune "rima" divi. Heano zviitiko zviviri zvinonzwisisika:
Muenzaniso 1: Uri Kuita Nenzira Yakawandisa
As counter-intuitive as it may seem, pane chinhu chakadai sekuita "zvakawandisa" kana zvasvika kune vatengi. Kugara tichirova midziyo yezvinhu zvese 'zvinoshanda,' isu tinonzwisisa kuti hazvigoneke kupa rutsigiro pane yega chiteshi kana kuva; kwese kwese 'neimwe pfungwa. Kupererwa nehukuru hwevanhu uye kuwandisa kwemitengo zvinowanzo taurwa sezvikonzero zvikonzero zveizvi. Kusvikira izvozvi, kufunga kunoraira kuti zviri nani kana ukasarudza nzira chaidzo dzinonzwisisika kune vatengi vako.
Nekudaro, kana iwe uchida, dzosera kumashure pane chiteshi chisiri kukushandira. Asi zvinonyanya kukosha, zviite nenyasha. Izwi rekushandira riri munyasha. Heino rondedzero inobatsira yematanho iwe aunogona kutora kuti uve nechokwadi chekuti vatengi vako havazopedzisira vachinzwa kutsamwa uye kusagutsikana (nekuda kwechimbichimbi uye isingadzivisike shanduko dzinouya kwavari):
Pinda mune yako pfungwa yemutengi kudzivirira matambudziko / kushungurudzika kwavanogona kusangana nako. Nekugamuchira nzira inonzwira tsitsi, unogona kurerutsa marwadzo avo uye kugadzirisa zvinetswa zvavo.
Shandisa iyo shanduko kuburikidza nematanho panzvimbo yekubvisa maturusi ekutsigira zvese kamwechete. Imwe nzira yekuita izvi ndeyekupa imwe nzira yekutsigira uye nekuisimbisa pachikuva usati wabvisa chero rudzi rwevatengi rutsigiro.
Sarudza zvimwe kugadzira uye kusarudzika sarudzo dzevatengi kana nzira dzavharwa chete. Gwara redzidzo rinoshanda nemazvo kubata-vanobata vatengi uye nekuisa zvese sarudzo dziripo kwavari.
Tora zvimwe nzira yakatwasuka uye yakatendeseka yekutaurirana kana zvasvika pakudzidzisa vatengi nezvenzira dziripo dzekutsigira dzavanogona. Semuenzaniso, hezvino izvo izvo brand Kinsta inotumira kune vatengi vavo:
Basa rekutsigira rinowanzoda kungwarira, kufunga kwakadzama uye kuferefeta. Kuchengeta rutsigiro chete pamhepo kunotibvumidza kuti zvirinani kukubatsira iwe kunetsa webhusaiti yako nenzira inokurumidza uye inoshanda, sezvo mainjiniya edu achigona kuisa simba ravo rese mukugadzirisa zvinetswa zvako zvekutsigira nenhamba shoma yekukanganisa uye zvinokanganisa zvinoita. Izvi, zvakare, zvinoreva kuti zvikumbiro zvako zvekutsigirwa zvinogadziriswa nekukurumidza.
Funga nezvazvo kutsigirwa kwevatengi serwendo uye uone akakosha ekubata mapoinzi anozivisa vatengi nezve shanduko dzakaitwa kune yekutsigira system. Izvi zvinosanganisira mienzaniso yakadai sekudzoreredza mapeji ekare ekumhara kumusangano wenharaunda uko vatengi vanogona kuwana zvitsva uye zvinokurudzira zvinhu pane izvo zvigadzirwa zviri kuenderera zviripo - zvine chekuita nerutsigiro kana zvimwewo.
Key Takeaway: Chirevo, "zvimwe zvirinani" hazviwanzo kufarirwa kana zvasvika pakushandisa maturusi ekupa stellar chiitiko chebasa revatengi. Dzimwe nguva, mashoma uye akasarudzika sarudzo dzinoita basa racho zvirinani uye nekukurumidza. Zvakare, zvine musoro kutungamira vatengi vako mukati me 'shanduko' dziri kuitwa nenzira yekutaurirana yakajeka uye inoshanda uye nekupa dzimwe sarudzo dzekutsigira.
Muenzaniso 2: Hausi Kutarisa "Zvakaringana" pane "ZVAKAIPA" Zviitiko zvekutsigira vatengi.
Vatengi vanowanzo kuda kambani nezvayo zvakasiyana zvipo, kukwikwidza mitengo, kurerukirwa zviri nyore, uye zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, pakati pezvimwe zvinhu. Kashoma kwazvo kuti "ruzivo rwakanaka rwevatengi" rwuuye pane runyorwa rwezvikonzero nei nei vachida brand A pane brand B.
Nekudaro, zvinofadza, basa rakaipa revatengi inowanzo kuve chimwe chezvikonzero zvekutanga nei vatengi vachirega kuita nekambani. Mimwe mienzaniso inouya mupfungwa:
Idzo dzisingagumi-refu mitsetse parunhare kubva kune mutengi webasa mupi.
Bhegi riya rawakarasa uchienda kuhoneymoon.
Imba yehotera yakashata iyo yakazopedzisira yadhura bhomba kukadhi rako rechikwereti.
Rondedzero inoenderera mberi ... Izvo hazvitaure kuti iyo yese iyi mienzaniso inogadzirira yakaipa vatengi ruzivo iyo inoda kupindira nekukurumidza.
Muchokwadi, chidzidzo chakaitwa neCustomer Contact Council chakawana mbiri mbiri dzinonakidza dzinofanira kuita chikamu chehurongwa hwevatengi vekambani: Inoti:
Kufadza vatengi hakuvaki kuvimbika; kudzikisira kushanda kwavo-iro basa ravanofanira kuita kugadzirisa dambudziko ravo-rinoita.
Mutengi Wekubata Kanzuru
Izvi zvinorevei kuti yako brand-kukosha-wedzera inofanirwa kutenderedza kutenderedza kunetsekana kwevatengi pane kupa chinoshamisira, zvishoma zvisingabatsiri maficha.
Kuwedzera pakutsvaga kwekutanga, inoti:
Kuita nemaune pane iyi njere kunogona kubatsira kuvandudza sevhisi, kudzikisa mutengo wevashandi, uye kudzikisira vatengi churn.
Key Takeaway: Vatengi vakazvipira kutsiva nekuda kwemasevhisi akashata pane makambani emubairo webasa riri nani. Kana chimbo chako chisingafunge netsoka dzacho uye chichidzikisa danda rekumashure kweavo vanoramba vachiwedzera zvichemo zvevatengi, rinowira pasi mugomba retsuro - risingazomutsiridzwazve.
Mibvunzo yakakosha yekufunga paKugamuchira nzira ye "Mutengi-Chekutanga"
Kana zvasvika pakukweretesa ruoko rwekubatsira uye nzeve inonzwira tsitsi kune vatengi vako, kune mimwe mibvunzo yakakosha inoda kuongorora uye kuongorora:
Imwe Fomu Yakajairika Yekubvunza.
Ndivanaani vatengi vako?
Ndezvipi zvaunoda / zvavanoda?
Unogona here kunyora zvakasarudzika zvakasarudzika zvakasiyana zvehuwandu hwevanhu?
Imwe Fomu Yakanyanya Kubvunza.
Kubva pakuona kwevatengi, "kukurumidza" sei kukurumidza kana zvasvika pakupindura? Masekondi gumi, maminetsi mashanu, awa, kana zuva?
Nderupi rwepakati raunofanira kushandisa sehwaro hwerudzi rwemubvunzo / kunetsekana. Chaizvoizvo, zvinoda kutara pakati penyaya dzinoda rutsigiro rwefoni nenyaya dzinogona kugadziriswa online. Kazhinji, nyaya dzemari dzinoda rutsigiro rwefoni kuti dzigadzirise nekukurumidza uye nekugadzirisa.
Zano rinobatsira: Kana zvasvika pakunzwisisa mutengi wako, tora izvi sechigunwe mutemo:
Teerera kune izvo vatengi vako vari kukuudza iwe - asi kwete zvakanyanya.
Unovhiringidzika? Ngatitorei muenzaniso. Zvatinoreva ndezvekuti kunyangwe vatengi vangave vachikumbira rutsigiro rwefoni, chavanonyatsoda kupindura nekukurumidza. Kusvikira izvozvi, zvinokurudzirwa zvikuru kuti timu yako yekutsigira inodzidziswa iyo inogona kuvabatsira kuti vakurumidze uye nekukurumidza kugadzirisa mibvunzo yevatengi.
Izvo Zvakanakira & Zvayakanakira zvePamusoro Vatengi Tsigiro Zvishandiso: Iyo Inokurumidza Nongedzo
Hapana mubvunzo kuti kana zvasvika kune vatengi masevhisi, makambani akasiyana anosarudza nzira dzakasiyana - pahwaro zvido zvavo, zvinotarisirwa nevatengi, zvinonetsa bhajeti, zvichingodaro. Uyezve, uine huwandu hwesarudzo huripo nhasi, zvinogona kuvhiringidza uye kukurira kutaura zvishoma. Kuti zvinhu zvikuitire nyore, isu takanyora pamusoro zvayakanakira nezvayakaipira zvina zvakakosha kasitoma rutsigiro nzira dziri kuita nhasi, dzinoti:
Ndiyo here "Kurudyi Kurudyi" Yekupa Rinojekesa Ruzivo rweMutengi?
Zvakanakira kushandisa foni rutsigiro:
Iyo ndeimwe yemhando dzakakurumbira uye dzakasarudzika dzesarudzo dzevatengi pakati pezvikwata pasi rese.
Iyo yakanangana fomu yekutaurirana isingasiye nzvimbo yezvikanganiso kana kusanzwisisana.
Iyo pakarepo uye nenzira kwayo inogadzirisa kunetseka kwevatengi nemanzwiro.
Iyo inoshanda mukutarisira zvinhu zvakaoma uye zvinoda kukurumidza izvo vatengi vangatarisana nazvo.
Cons yekushandisa rutsigiro rwefoni:
Zvingaite senge zvechinyakare kana zvechinyakare kunyanya kuchizvarwa chevechidiki sezvavanofarira kutumira mameseji pane kutaura.
Zvinogona kutungamira mukumanikidza kwakanyanya uye kushungurudzika kana vatengi vakapedzisira vakamirira kwenguva yakareba. Izvi zvinowanzoitika kana vamiririri vakabatikana kana kana kambani iri pasi pevashandi.
Unyanzvi nyaya dzakadai sehurombo network dzinogona kutadzisa vatengi kudaidzira rubatsiro.
Kugona Kuva "Chatty" Kuita Kukuvadza Kwakawanda pane Kunaka?
Zvakanakira kushandisa chat chat.
Iyo inopa iyo pakarepo uye inoshanda mhinduro resolution - dzimwe nguva se yakakwirira se92% pakati pevatengi!
Iyi imwe nzira yakachipa pane kutsigirwa nefoni uye inoshanda sehwaro hweruzivo.
Iyo inopa vamiririri / bots kuti vataure nevanhu vakawanda panguva imwe chete. Muchokwadi, dhata neCallCentreHelper inoratidza kuti kwakatenderedza "70% yeavo vamiririri inokwanisa kubata 2-3 hurukuro panguva imwe chete, nepo 22% yevamiriri vanotsigira vanogona kubata nhaurirano 4-5 panguva. "
Inobatsira makambani kugadzirisa mashandiro uye nekupa ruzivo rwakatungamirwa nekubatanidza zvemberi maficha senge chatbot uye co-kubhurawuza zvichiteerana.
Iyo inopa kugona kuteedzera kweiyo hurukuro (kazhinji nenzira yedhibhodhi) iyo inoshanda senge inobatsira remberi remangwana kumutengi pamwe nemumiriri wevatengi.
Iyo inopa masimba marands sezvavanogona kukwidzirisa nzwisiso yakakosha (yakatorwa kubva kumarongero ehupenyu ehupenyu) senge maitiro ekutenga evashandisi, zvichemo zvakapfuura, zvinokurudzirwa nemutengi uye zvinotarisirwa, nezvimwe uye nekuzvishandisa kuendesa zvirinani masevhisi / zvipo.
Cons yekushandisa chat rutsigiro:
Zvinoenderana naKayako, mhinduro dzakanyorwa dzinosemesa vatengi vako. 29% yevatengi vanoti vanowana mhinduro dzakanyorwa dzinoodza moyo, uye makumi matatu neshanu emabhizinesi anobvumirana.
Zvinogona kutungamira mukugutsikana kusagadziriswa kwezvinhu kana iyo chatbot isingakwanise kugadzirisa kunetsekana kwevatengi uye inofanirwa kuendesa mushandisi kune mumiririri. Nomuzvarirwo, inopedzisira yatora nguva yakawanda uye inotungamira kune asina kugutsikana mutengi.
Inogona kukurumidza kuwedzera kubva pakuve inodakadza uye inobatsira kusvika mukutsamwisa kana kokero dzekutaurirana dzakashandiswa zvisirizvo kana kushandiswa kakawanda.
Waizviziva Here? Dhata neKushambadziraDive inotaura kuti vanhu vanopfuura makumi mashanu nemashanu vanoreva rutsigiro rwefoni pamusoro pemamwe mapuratifomu.
Tsamba ndiyo Nyowani Nyowani Yekutaurirana - Kana Ndizvo?
Zvakanakira kushandisa email rutsigiro:
Iyo ndeimwe yenzira dzinoshandiswa zvakanyanya-dzekutaurirana. Muchokwadi, data inoratidza kuti vanhu vanotumira 269 mabhiriyoni maemail mazuva ese.
Inopa masimba ekutumira mibvunzo - husiku kana masikati, mazuva makumi matatu nemazana matatu pagore.
Iyo inopa yekuzvidira, yakanyorwa humbowo (yekushaikwa kwetemu iri nani) yekureva ramangwana kuitira kuti munhu wese agare ari papeji rimwe chete.
Iyo inowirirana semukana wekugadzirisa mibvunzo yakafanana nekushandisa chat bot zvivakwa.
Inobatsira mabrand kuti ataure nevatengi nenzira yakasarudzika uye zvisina kurongwa. Iwe unogona zvakare kutevera-kumusoro pane zvakapfuura kukurukurirana zviri nyore.
Cons yekushandisa email rutsigiro:
Inogona kutungamira kune zvisina kumanikidzwa zvikanganiso. Semuenzaniso, iyi email yeAmazon yakatumirwa kune vanhu vanga vasingatarisire mwana uye vamwe vaitove nenyaya dzekubereka! Sezvaunogona kufungidzira, kutsamwa kwevanhu vese kwaive pakakwirira. Kuongorora pane otomatiki email anotinyorera zvinyorwa zvese zvino-uye-zvadaro inofanirwa kudzivirira njodzi dzakadai seizvi.
Izvo zvinotora nguva yakawanda kupesana nerutsigiro rwefoni.
Izvo hazvipe nekukurumidza mhinduro yekugadzirisa sezvo maemail anotora nguva yakareba kuti apindure. Ichi chinhu chakaipa sezvo Forrester Research ichiti "41% yevatengi vanotarisira mhinduro yeemail mukati memaawa matanhatu."
Zvinoda hunyanzvi hwakawanda hwakadai sekugona kugona kuverenga pfungwa dzemushandisi uye kuverenga pakati pemitsara. Iyo yekutaurirana yakanyanya kunangana uye inogona kugadziriswa. Zvese mune zvese, mamiriro ekutaurirana anogona kurasika nyore pakati pemazhinji maemail exchange.
Yemagariro Media Rutsigiro:
Kuva nePamhepo Yemagariro Kuvapo Boon kana Bane?
Zvakanakira kushandisa social media rutsigiro:
Inopa nzira dzakasiyana siyana makambani anokwanisa kugadzirisa kunetseka kwevashandisi senge kutumira mhinduro, zvakavanzika / zvakanangana nematauriro, uye mameseji eboka. Izvo zvinobatsira kuitisa tsvagurudzo yemusika uye kunzwisisa zviri nani mushandisi wako.
Kuva neruzhinji nehunhu, zvinobatsira vashandisi kuwana mhinduro kumibvunzo yavanogona kunge vaine semunhu angave akatotumira kare. Mhando dzinogona kuumba nharaunda yemusangano inosunga vanhu vane pfungwa pamwe chete uye inobatsira kugadzirisa mibvunzo yavo / zvinonetsa.
Iyo chaiyo yemahara-ye-mutengo uye inopa yakakura mukana wevatengi feedbacks.
Inogona kuita semukana wakakura wemabhurandi kuhwina kuvimba kwemushandisi nenzira yevatengi kutumira zviitiko zvakanaka. Mhando dzinogona zvakare kushandisa pfungwa yekuseka uye kuve neunyanzvi mukugadzirisa zvinonetsa mushandisi! Skyscanner inoratidza izvi zvine mutsindo mumuenzaniso unoratidzwa pamusoro.
Inotaridza kugona kwekambani kuchinja uye kuchinjika kunguva dzine simba sekushanda pasocial media kuri kudikanwa nhasi. Kuwedzera kukuru sekutsvaga kweKushambadziraDive kunofungidzira kuti "25-gore-makore uye pazasi vakasarudza vezvenhau senzira yavanofarira yekutaurirana kuitira vatengi. ”
Iyo zvakare inogonesa yakakura vatengi kubatanidzwa uye inobatsira mabrandi kuvaka zvechokwadi hukama hwakakosha nevashandisi.
Nezvayakaipira kushandisa pasocial media rutsigiro:
Inogona kusvibisa zita rechiratidzo kana akawandisa mapositi akaonekwa munzvimbo dzeveruzhinji dzakadai seFacebook, Twitter, nezvimwewo. Kutendeseka uye kuuya kunogona kubatsira kudzikisira zvakanyanya kusvika pazvinogoneka.
Inoisa njodzi yekuita isingadiwe (semuenzaniso kudheerera / kutaura kunoshoreka) uye inogona zvakare kutungamira kune njodzi dzekuchengetedza senge kuburitsa ruzivo kana kubiridzira.
Zvinoda kugara uchitariswa uye nekukurumidza mhinduro kuti udzivise mutengi flak
Kuudza reps kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi zvinoita kuburitsa kuvhiringidzika, kutambisa nguva nesimba, uye zvinodhura kupa.
Kana zvasvika pakusarudza akakodzera mutengi kutaurirana maturusi, hapana imwe-saizi-inokodzera-ese maitiro ayo mabrand anogona kutora. Masangano anofanirwa kuisa mumapoinzi akakosha akawanda senge zviwanikwa zviripo, bhajeti uye zvipingamupinyi zvenguva, zvinodiwa nevatengi uye zvinotarisirwa nevashandisi, nezvimwewo kuti vauye nezano rekutsigira vatengi rinoendesa kumaakaunzi ese:
Nekupa isina musono, isina kunetseka, yakasarudzika, uye yakanaka ruzivo rwevatengi kune mushandisi.
Nekuona kuti marongero haabhadhare kambani - nemari kana neimwe nzira.
Nekupa kukosha kwakakosha-kunowedzera kune vese vanobatika vanobatanidzwa - kubva kune vanoisa mari uye vatengi kune vashandi vekambani uye munharaunda yakajairika.
Wakashongedzerwa neruzivo rwese urwu, inguva yekufamba hurukuro uye kuburitsa yeupenzi-chiratidzo chevatengi ruzivo - iyo inovaraidza uye inodzidzisa vatengi vese panguva imwe chete. Urimo here? Takafunga kudaro.
Tags: muchiso mukurumbiraemail rutsigirorubatsiro rwemagariro evanhu
Ashwini ane shungu neBusiness, Entrepreneurship, E-commerce, uye Kushambadzira kweDigital. Ari kushanda na Tora senyanzvi yekushambadzira yedhijitari. Iye mweya wakasununguka uye nyanzvi yekudzidzira uyo anoshandisa nguva yake yekusununguka naiye, anodiwa kamwe, mimhanzi, pamwe nekutarisa & kutamba mitambo. Iye akapindwa muropa negungwa uye mumigwagwa ari mufambi anotsvaga mafaro kuti awane zviitiko zvitsva sezvaanotarisa hupenyu semabasa edu ehunyanzvi.